Eminye imifanekiso emibini yokwenyani ye-Samsung Galaxy S7 edge | I-Androidsis
Imithombo evuzayo yemithombo yemifanekiso efana ne- @evleaks inomsebenzi omninzi kwezi ntsuku kunye neefoto zesikrini ngequbuliso ezingena kwiibhokisi zebhokisi, ungazi ngokwenyani ukuba ngubani ovuza ezo ndaba. Abanye banikezela kunye nemifanekiso yokwenyani Oko kuthetha ukuba inxenye yamacandelo efowuni entsha eya kuthi ikwazi ukonwabisa izigidi zabasebenzisi okanye leyo intsha izama ukubuyisa ilahleko efunyenwe kwiminyaka edlulileyo inokukhutshwa njengoko kusenzeka kumenzi othile esaziyo eTaiwan. Ezi ntlobo zokuvuza ziphantse zikhulise umdla kwezi fowuni zintsha apho abavelisi bachitha khona izigidi zeedola kwintengiso nakwimveliso.
Enye yezo zibonakale kwiiyure ezidlulileyo, inye enxulumene nencasa entsha ye-Samsung Galaxy S7 eza kuthi thaca kule Cawa ivela esandleni se-CEO ye-Samsung. Ukusuka kwesi siphelo sikhethekileyo kwiscreen sakho kunye nomphetho wesibini, besineendaba kwithuba elidlulileyo leyo iya kuba yeyona ibalulekileyo, njengoko iphindaphindwe kabini inani lee-pixels eziya kufumaneka kule paneli. Kolu luhlu sinalo imifanekiso emibini yokwenyani ye-Samsung Galaxy S7 eya kuthi ivele kwiintsuku zayo. Imifanekiso emibini esibonisa ngenye indlela ukuba i-S7 edge apho besikhe sakwazi ukuqokelela khona kule mpelaveki iphelileyo isisombululo esiphezulu esibonisayo kuyo yonke imilinganiselo.
1 Umda we-Samsung Galaxy S7, ifowuni yeejika
2 Iifoto ezimbini ezinemikhondo yeenyawo zazo
Umda we-Samsung Galaxy S7, ifowuni yeejika
Ngale mifanekiso mibini mitsha imvakalelo efanayo ebuyayo xa unomphetho we-Galaxy S7 engqondweni, kwaye zezi ezinye ezinento yokwenza neejika. Ndicinga ukuba licebo elilungileyo ukuba iSamsung ifuna ukugxininisa intsingiselo yegophe kwiflegi yayo entsha, kuba ibiyenye yezimanga zayo kunyaka ophelileyo xa isungula umda we-Samsung Galaxy S6, apho icala laligqibe kakhulu ezizodwa kwaye ezihambelana nayo kwi-smartphone ekhethekileyo. Nabani na ophethe esandleni sakhe uyazi ngokuqinisekileyo ukuba ndithetha ukuthini.
Ukuba ngoku sidibanisa ezinye iikona ezijikelezileyo ezibonelelayo iimpawu ngakumbi kufutshane egosogosoSijongene ne-Samsung smartphone eyenza phantse i-ode kwigophe. Umkhwa ophawulwe zii-Apple iPhones kunye nezo ziqokelelwa yi-Samsung ukuzisa ezona fowuni zibalaseleyo, ezinje ngezo ziya kubakho kwiNkomfa yeHlabathi yeBhola ekwiBarcelona.
Singatsho ukuba igophe likwimfashini kwaye ngokuqinisekileyo asihlali kwezi zinto zimbini ukuze unyaka wonke ubonakale usungula isiphelo sendlela esilingisa ezo mbombo Ujikeleze kwi-Galaxy S7 kunye ne-iPhone 6.
Iifoto ezimbini ezinemikhondo yeenyawo zazo
Ukuba ufuna ukucacisa ukuba le fowuni inayo isivamvo somnweYeyiphi indlela ebhetele kunokubhengeza eminye imizila ebonisa ngeemveliso zabo ukuba ukudityaniswa kwale nto kubonakala njani, nto leyo ebaluleke kakhulu kubasebenzisi abaninzi abaye bafumanisa ukuba kukhululekile ukuvula ifowuni ngale ndlela.
Imifanekiso emibini iyinyani kwaye ngaphandle kwalawo manqaku eminwe esinokuwabona ukubonakaliswa komntu ozithathayo. Zibonisa ngokuchanekileyo indlela egobileyo ngayo i-smartphone kunye nokuba iqhosha lasekhaya likhulu kancinci kangakanani kunangaphambili. Ngale ndlela kukwaqikelelwa ukuba ifowuni iya kuba nakho ukufumana iminwe ngokukhawuleza nangokuchanekileyo.
Olunye uncedo lokugcina le fowuni, ubuncinci apha eYurophu, lolongezelelweyo Fumana iGear VR eyiyo isixhobo simahla, ke abo bafuna ukonwabela olunye uhlobo lokuzonwabisa, ngokuqinisekileyo akukho kubi kangako ukuyithenga ngaphambi kokuba le flegi intsha yakwaSamsung ibe semarikeni.
Elinye inyathelo lithathiwe Phambi kokufika kwe-Galaxy S7 kwaye ezo ndaba ziya kuba zimbalwa ukuzinika kwezi ntsuku zimbalwa sishiyele ukuba sizazi zivela e-Barcelona ukuba kuya kwenzeka ntoni kwi-Mobile World Congress evela kwisandla sika-Samsung.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Imifanekiso emibini emitsha yokwenyani yomda we-Samsung Galaxy S7 ihluziwe
Eyona ndlela ikhawulezayo yokwabelana ngeefayile phakathi kwezixhobo ze-Android